Home Horyaalka Ingiriiska Kuwa Islaamka naceybka u qabo si naxariis leh hubka aan uga dhigno...
Ciyaaryahan Jarmal ah oo asal ahaan ka soo jeeda Turkiga Mesut Ozil ayaa ugu baaqay dunida Muslimka inay “si naxariis leh hubka uga dhigaan Islaam nacaybka”.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Ozil ku soo qaatay aayad quraan ah: “Wanaagga iyo xumaanta sinaan ma wada noqon karaan. Kaga jawaab xumaanta waxa ugu fiican, markaa kan aad isku heysaan wuxuu la mid noqonayaa saaxiib dhow.”
Nasiib darro Islamophobia & Antiislamismus ayaa ku soo badanaya Yurub iyo meelo kale oo adduunka ah iyadoo warbaahinta ay door weyn ka ciyaareyso arrintaas, ”ayuu yiri.
Jawaabteyda shaqsiyadeed ee ku aadan taas: Waa inaan ugu jawaabno Islaam nacaybka & Antiislamismus qaab aan sii xoojin doonin, laakiin aan hub ka dhigis ku sameynno oo aan ku aamusino si naxariis leh, “31 jirkaan khadka dhexe ayaa yiri.
Ozil ayaa ku soo biiray kooxda ka dhisan Horyaalka Ingiriiska ee Arsenal sanadkii 2013, waxaana uu dhaliyey 44 gool 77 kulanoo saftay sidoo kale oo caawiyey 254 kulan oo u ciyaaray Gunners.
Wuxuu sidoo kale u soo ciyaaray kooxaha Jarmalka ee Schalke iyo Werder Bremen iyo sidoo kale kooxda reer Spain ee Real Madrid.
Ozil ayaa sidoo kale qeyb ka ahaa xulkii Jarmalka ee ku guuleystay Koobkii Adduunka ee 2014.
Previous articleIsco oo doonaya in oo iskaga tago kooxda Real Madrid iyo kooxo dalabyo adag kasoo gudbiyey
Next articleWararka suuqa kala iibsiga ee Manchester United: Ansu Fati, Paul Pogba, Diogo Dalot